Accueil > Gazetin'ny nosy > Krizy pôlitika: Ny fahantram-bahoaka no fotony fa tsy raharaham-pifidianana
Krizy pôlitika: Ny fahantram-bahoaka no fotony fa tsy raharaham-pifidianana
Misy fahadisoam-pamakafakana ihany matetika eto amintsika, ary misy ny olona sasany manararaotra mba hiarovan’izy ireny tena na hikatsahany zavatra hafa. Ny tontolon’ny raharaham-pirenena sy ny krizy pôlitika eto no tian-kivoitra amin’izany. Tato ho ato dia resahina hatrany ny hoe « ny raharaham-pifidianana no loharano niteraka ny krizy pôlitika teto Madagasikara hatramin’izay ». Ny dikan’izay dia te hikatsaka vahaolana peta-toko ny olona sasany ka hoe « rehefa mazava ny fitsipi-pifampifehezana sy fitsipi-pifampitondrana mbamin’ny didy aman-dalàna amin’ny raharaham-pifidianana, rehefa miezaka manaja an’ireo fitsipika sy didy aman-dalàna ny mpifaninana isan-tokony sy ny ambaratongan-
drafi-panjakana, ary ny mpisehatra pôlitika mpanohana ny mpifaninana dia tsy maintsy tsara fototra ny fifidianana ka hoeken’ny rehetra ny vokatra. »
Dia izay rafi-pisainana izay no lalaovin’ny Fianakaviambe iraisam-pirenena handrebirebena ny mpisehatra pôlitika isany sy ny avy amin’ny firaisamonim-pirenena misahana ny fanaraha-maso ny fifidianana sy ny fanabeazana ho olom-pirenena.
Tokony tsy hadinoina anefa fa ny fianakaviambe iraisam-pirenena matoa mampirisika ny hifanatonan’ny mpisehatra pôlitika isanisany sy ny firaisamonim-pirenena, dia te hamoaka ho mpandresy ara-dalàna sy ara-drariny ny olony amin’ilay fifidianana izy, ka mba tsy hisy fanoherana na savorovoro aorian’ny fifidianana.
Izay no adikan’ny olona sasany hoe « voasoroka ny krizy pôlitika ».
Ho anay kosa dia diso izany fomba fijery izany. Izahay tsy milaza akory hoe « tsy tsara ny mamolavola lalàna tsara rafitra hiantohana ny fahalavorarian’ny fifidianana ». Izahay koa tsy mampirisika ny mpifaninana sy ny namany handika na tsy hanaja an’izany lalàna izany sy ny lalàna hafa.
Tsy ekenay kosa ny hanaboriboriana ny resaka hoe « rehefa eken’ny rehetra ny voka-pifidianana dia voasoroka na terena tsy hisy ny krizy pôlitika ».
Aminay dia tsy ny olana ara-pifidianana na ny savorovoro ateraky ny tsy fahatomombanan’ny fifidianana loatra no loharanon’ny krizy pôlitika fa ny fahantram-bahoaka.
Matoa henjana ny fifanolanana pôlitika nitranga teto Madagasikara, izay adika hoe « krizy pôlitika » dia efa tsy zakan’ny vahoaka intsony ny vaikan’ny fahantrana mianjady aminy. Ny pitik’afo nampirehitra ny krizy no mety ho raharaham-pifidianana, toy ny tamin’ny 2002, fa ny olana nianjady tamin’ny vahoaka, izay mbola mitohy hatramin’izao no tena fotony.
Tamin’ny 1971 sy 1972 ange ka tsy resaka fifidianana no niteraka krizy pôlitika teto fa ny fomba fitondran’ny Pisodia ny raharaham-pirenena izay niteraka fahantrana, sekoly miangatra, tsy fandriam-pahalemana, kiantrano an-trano amin’ny raharaham-panjakana, sy ny maro hafa e !
Tamin’ny 1991 ange ka tsy fifanolanana ara-pifidianana no niteraka ny krizy pôlitika teto fa ny fomba nitantanan-dRatsiraka ny firenena ka niteraka fahantrana lalim-paka tamin’ny vahoaka no tsy zakan’ny ambanilanitra intsony, ka nohararaotin’ny fianakaviambe iraisam-pirenena ny fiovan-tsoridalan-dRatsiraka niroso tamin’ny fanalalahana (liberalisma) nefa ny Lalàmpanorenany sy ny fandaharan’asam-pireneny (programam-pireneny) dia nifototra tamin’ny sosialisma sy ny Boky Mena e ! Ny tamin’ny 2002 no hoe ny fifanolanana ara-pifidianana no nampipoaka azy ary mbola ny tohin’ny fampahantram-bahoaka sy ny fanamparam-pahefan’ny Amiraly Ratsiraka ihany koa no tena fotony. Toraka izany koa tamin’ny 2009. Tsy olana ara-pifidianana loatra no tena antony, na nisy aza ny fahatsapana fa nisy hala-bato sy hosoka tamin’ny fifidianana nitranga, fa ny fanamparam-pahefan-dRavalomanana tamin’ny sehatra maro no tena fotony, izay tsy nampihena akory fa vao mainka nampihombo ny fahantram-bahoaka efa nitambesatra nandritra ny fitondrana nifandimby teto.
Hahafahana manaporofo koa fa tsy voatery hiteraka krizy pôlitika ny olana ara-pifidianana dia saika nisy hosoka sy hala-bato ary faneriterena ny vahoaka hatrany ny fifidianana nisy teto hatramin’ny 1942, mbola andron’ny fanjanahan-tany, ankoatra ny fifidianana an’ireo solombavambahoaka Mdrm (Ravoahangy sy Raseta) tamin’ny 1946 sy 1947. Tamin’izao fitondrana Hvm izao koa dia nanjaka ny hosoka sy hala-bato mbamin’ny fanerena ny mpifidy ho tsy maintsy mandrotsa-bato ho an’ny kandidan’ny Hvm, toy ny tamin’ny fifidianana ben’ny tanàna sy fifidianana loholona, saingy hain’ny Hvm ny nangeja ny fahefam-panjakana mba hamoretany an’izay mety hanohitra, ka tsy nitranga ny krizy politika.
Fa iza amin’ireo firaisamonim-pirenena sy mpanao pôlitika miara-mivory hatramin’ny omaly na talohan’izany tao amin’ny Le Pavé etsy Antaninarenina, na ny mbola hitohy rahampitso alakamisy, no afaka hiantoka fa na mirafitra sy toa volamena aza ny lalàm-pifidianana ka mifanaraka ny mpisehatra sy mpifaninana fa hanaiky ny voka-pifidianana eo, iza aminareo ireo no afaka hiantoka fa tsy hisy izany krizy pôlitika izany aorian’ny fifidianana ?
Izahay dia manahy mandrakariva ny krizy pôlitika hitranga eto raha mbola mahantra ny vahoaka ary raha mbola manampatra fahefana ny mpitondra. Mbola hahantra hatrany anefa io vahoaka io raha mbola mitohy ny fiankinan-dohan’ny mpitondra amin’ny mpampisambo-bola iraisam-pirenena sy ny fiankohofana eo ampoto-tongotry ny fianakavimabe iraisam-pirenena loharanon’ny fampahantrana ny vahoaka malagasy hatrizay.